राजेन्द्र महतो भन्छन् : उपेन्द्र यादव अपराधी हुन्, पार्टीमा राख्दैनौं « AayoMail
राजेन्द्र महतो भन्छन् : उपेन्द्र यादव अपराधी हुन्, पार्टीमा राख्दैनौं
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन्।
राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुअघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरिसकेका थिए।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहे पनि सोमबार जसपामा देखिएको मत विभाजन बाधक बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइरहँदा जसपाभित्र दुईवटा स्पष्ट ‘लाइन’ प्रकट भयो।
महन्थ–राजेन्द्र पक्षीय १५ जना सांसदहरू तटस्थ बसे भने बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका १५ सांसदरू विश्वासको विपक्षमा मतदान गरे। र, प्रतिनिधिसभामा जसपाभित्र देखिएको दुईवटा ‘लाइन’ सत्तासमीकरणमा पनि देखिएको छ। आधा सांसद तटस्थ बस्नु र आधाले विपक्षमा मतदान गरेपछि राजनीतिक रूपमा जसपा विभाजन भइसकेको प्रष्ट हुन्छ।
बाबुराम–उपेन्द्रले सरकार गठनका लागि गरिरहेको प्रयासप्रति महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सोमबार मध्यरातमा विज्ञप्ति नै निकालेर सरकार बनाउने र सत्तासहकार्य पार्टीको उद्देश्य नरहेको बताए।
ठाकुरले नयाँ सरकार बनाउने खेलमा नलागेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने संकेत गरिसकेका छन्।
यसैगरी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोपनि गठबन्धनको सरकार बनाउने अध्यक्ष यादवको प्रयासप्रति रुष्ट बनेका छन्।
यहाँसम्म कि सरकार बनाउने खेलमा लागेको यादवलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिने महतो बताउँछन्।
‘उपेन्द्रलाई सरकारमा पठाउन हामीले पार्टी बनाएका हौं र? यस्तोपनि हुन्छ,’ आयोमेलसँग महतोले भने,‘अहिलेसम्म पार्टी विभाजनको काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
जतिखेर पनि सत्तामा जान आतुर उनी अपराधी भइसकेकोले पार्टीमा राख्नुपर्ने जरूरी नै नरहेको महतोले बताए। ‘उहाँले पार्टीलाई विभाजनसम्म पुर्याइ दिनुभएको छ। प्रतिनिधिसभामा मत विभाजन नै गराइदिनुभयो। केही बाँकी नै राख्नुभएन। विभाजनको घोषणामात्रै बाँकी छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अपराधीलाई पार्टीमा किन राख्ने? निस्कासन नै गर्नुपर्छ।’
सत्ता लिप्सामा फसेर पार्टी र मधेशका मुद्दा धमिलो पार्ने काम उपेन्द्रले गरेको उनको आरोप छ।
महतोले सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपनि जसपा सहभागी नहुने बताए।
‘मधेश मुद्दा सम्बोधन अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छ, प्रधानमन्त्रीले कामपनि अगाडि बढाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘उपेन्द्र पार्टी होइनन् व्यक्तिमात्रै हुन्। सरकारमा पार्टी जाने हो व्यक्ति होइन्।’
जसपाको समर्थनबिना सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको विश्लेषण गरेका महतोले उपेन्द्रमात्रै गएर अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गरे।
‘जसपा भनेको उपेन्द्र मात्रै हो र? महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि हो,’ उनले भने, ‘उहाँ सत्ता लिप्सामा फस्नु भएको छ। सत्ताकै लोभमा गठबन्धनतिर लाग्नु भएको छ।’
पार्टी एकता भएदेखि अध्यक्ष यादव पार्टीलाई विभाजन गराउने षडयन्त्र गर्दै आइरहेको महतोको जिकिर छ।
‘पार्टी एकता भएसँगै छुट्टै गतिविधि गरेर विभाजनको रेखा कोरिसक्नु भएको थियो, सोमबार त उहाँले विभाजन नै गरिदिनुभयो,’ महतो भन्छन्, ‘तर उहाँको सत्ता लिप्साका कारण कार्यकर्ताहरू पार्टी विभाजन गर्न तयार छैनन्।’